Yahya ee Injil Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: Yahya ee Injil
Surah Al-An’Aam (Surah 6 – Lo’da, Xoolaha) waxay noo sheegaysaa inaan u baahan nahay inaan ‘toobadkeena’. Waxay leedahay
Suuradda Al-Anzam 6: 54
Waa maxay toobadku? Dhowr aayad oo ku jirta Surah Hud (Surah 11 – Hud) ayaa noo sheegaysa.
dambi dhaafna warsada Eebe una toobad keena wuxuu idiinku raaxayn nolol wanaagsan tan iyo muddo, wuxuuna siin cid kasta dheeraad leh (Fadli) dheeraadkiisa (Fadligiisa) haddaad jeedsataanna anugu waxaan idiinka cabsan Cadaab Maalin wayn
(Surah Hud11: 3
Qoomkayow Dambi dhaaf warsada Eebihiin una toobad kenna ha soo (Daayo) diro Samada (Roobka) korkiinna si badane hana idiinku kordhiyo xoog xooggiinii hana jeedsanina idinkoo Dambiilayaal ah.
(Surah Hud11: 52
Thamuudna waxaan u dirray Walaalkeed (Nabi) Saalax, wuxuuna yidhi Qoomkayow Caabuda Eebe Ilaa Eebe ka soo hadhay ma idiin sugnee, isagaana idiinka ahaysiiyey Dhulka idinkuna Camiray dhexdeeda ee dambidhaaf warsada una toobad keena illeen Eebahay waa dhawyahay oo ajiibaa (Baryade)
Surah Hud11: 61
Surah Hud11: 90
Waxaan soo aragnay in Zabuur uu ku dhammaaday Nebi Malaakii (NNKH) kaasoo sii sheegay inuu qof u imaanayo inuu ‘jidka hagaajiyo’ (Malaakii 3: 1). Ka dib waxaan aragnay siduu Injiilka ogu furmay sheegitaankii uu jabriil sheegay dhalashadii Nabi Yaxye iyo Masiixi(oo isaga bikrad ka imaan doono).
Nebi Yaxye (NNKH) – oo ku jira ruuxii iyo xoogga Nebi Eliiyaah
Injil wuxuu markaa diiwaan gelinayaa Yaxye dhalashadiisa kadib (oo sidoo kale loo yaqaanay Yooxanaa Baabtiisaha – NNKH):
80 Wiilkuna waa koray oo ruuxuu ka xoogoobay, wuxuuna joogay cidlada ilaa maalintii uu Israa’iil istusi lahaa.
Luukos 1: 80
Intii uu cidlada dhexdeeda ku noolaa, injiilku wuxuu diiwaan geliyaa:
Matayos 3: 4
Yaxyaxdiisa (NNKH) ruuxiisa adag yahay u horseeday inuu u labisto hab dag oo cunna cuntada duur. Laakiin tan ma aha sababtoo ruuxiisa oo keliya – sidoo kale waxay ahayd calaamad muhiim ah. Waxaan soo aragnay gabagabada Axdiga Hore in Diyaariyahii loo ballanqaaday uu ku yimaado ‘Ruuxa Eliiyaah’. Eliiyaah wuxuu nebi u ahaa reer Sabbur, oo isna cidlada buu ku noolaa oo wax ku cunayay,
wuxuu ahaa nin xaad badan,oo sun magad ahina dhexduu ku xidhnaa. ”
2 Boqoradii 1: 8
Sidaa daraadeed goortuu Yaxye ku noolaa oo u labisnaa sidaay ahayd, Waxaay ahayd in la muujiyo inuu isaga ahaa diyaariyaha imaanayay ee la sii sheegay inuu ku imaan doono Ruuxa Iliyaah ama Ilyaas.Dharkiisa, iyo noloshiisa iyo cunidda cidlada dhexdeeda waxay ahaayeen astaamo muujinaya inuu ku yimid qorshihii Eebbe ku dhawaaqay.
Injiilka-si adag buu u dhigay Taariikhda
Ka dib injiilka wuxuu noo sheegay taa:
Waxay ahayd sannaddii shan iyo tobnaad oo Tiberiyas Kaysar boqranaa, markii Bontiyos Bilaatos xukumi jiray Yahuudiya, oo Herodos taliye u ahaa Galili, walaalkiis Filibosna taliye u ahaa Ituraya iyo dalkii Tarakhoonitis, oo Lusaniyas taliye u ahaa Abilene, 2 oo Annas iyo Kayafas wadaaddadii sare ahaan jireen, markaasaa ereygii Ilaah cidlada ugu yimid Yooxanaa ina Sakariyas.
Luukos 3: 1-2
Bayaankaani wuxuu sheegayaa hooshii Waxsii sheegiddii NabiYaxye (NNKH) waana wax aad muhiim u ah maadaama ay astaan ​​u ahayd bilawgiisii ​​hooshiisa iyada oo la dhigayo meesha ku xigta hogaamiyeyaal badan oo caan ah taariikhdooda. U fiirso tixraacaan ballaaran ee ku wajahan taliyayaashii wakhtigaas. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan taariikh ahaan u hubino saxnimada waxyaabaha ku qoran Injiilka. Haddii aad sidaas sameyso, waxaad ogaan doontaa in Tiberius Kaysar, Pontius Bilaatos, Herodos, Filibos, Lysanias, Annas iyo Kayafas ay dhammaantood yihiin kuwa laga yaqaan taariikhyahannada cilmiga leh ee Roman iyo taariikhyahannada Yuhuudda. Xitaa cinwaanada kala duwan ee loo dhiibo maamulayaasha kaladuwan (tusaale. ‘Taliyihii’ ee Pontius Bilaatos, ‘tetrarch’ Herodos, iwm) ayaa loo xaqiijiyey inay taariikh ahaan sax yihiin oo sax yihiin. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan sameyno qiimeyn laga soo qaaday aragtida-taariikheed ee saxda ah ee sida hufan loo keeydiyay.
Qarnigii 14aad AD Tiberius Kaysar wuxuu kor u qaaday carshigii boqortooyada Roomaanka.Markaa oo ahayd sanadkiisii 15aad ee boqotinimadiisa tanoo micnaheeda yahay markii uu Yaxye ama Yooxaane uu helay fariimaha oo uu bilaabay sanadkii 29 AD
Fariinta Yaxye-Toobadkeena oo qirta
Haddaba maxaay ahayd Fariimahiisa? Siday noloshiisa ahayd oo kale fariintiisa waxay ahayd mid caadi,Laakiin mid toos ah oo xoog badan.Injiilka ayaa leh:
Maalmahaas waxaa yimid Yooxanaa Baabtiisaha isagoo cidlada Yahuudiya wax ku wacdiyaya, oo leh, 2 Toobadkeena, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.
Qayb ka mid ah farriintiisu waxay ahayd ku dhawaaqidda runta – in boqortooyada jannada ay soo dhowdahay ‘. Waxaan aragnay sida nebiyadii Axadiga hore waqti dheer ka hor uga sii sheegeen ‘imaatinka’ Boqortooyada Ilaah ‘. Yaxye (NNKH) wuxuu leeyahay hadda way soo dhowdahay.
Laakiin dadku diyaar uma aha Boqortooyada inay soo noqdaan mooyaane. Dhab ahaantii, haddii ayan ‘toobad keenin’ way seegi doonaan Boqortooyadaas. Toobaddu macnaheedu waa “inaad maskaxdaada beddesho; dib u milicso; ama, inaad si ka duwan uga fakartid. ”Laakiin maxay ahaayeen inay si ka duwan uga fikiraan? Markaan eegno laba jawaabood oo dadku ka heleen farriinta Yaxya (NNKH) waxaan baran karnaa waxay ahayd inuu ku amray inay tahay inay toobad keenaan. Injil wuxuu diiwaangelinayaa in dadku ay uga jawaabeen fariintiisa iyagoo leh:
Mataayos 3: 6
Waxaa laga yaabaa inaad ku xasuusato buugaagta calaamadahii Adam, sidaya ahayd kadib markay cuneen mirihii laga mamnuucay Adam iyo Xaawa:
8 Oo waxay maqleen codkii Rabbiga Ilaaha ah, isagoo beerta dhex socda kolkii maalintu qaboobayd: oo ninkii iyo naagtiisii way iska qariyeen Ilaah, oo waxay ku dhuunteen geedihii beerta dhexdooda.
Bilowgii 3: 8
Tan iyo markaas, u janjeerida ah inaan qarinno dembiyadeenna oo aan iska dhigno inaannan samaynin wax annaga noo caadi ah. Qirashada iyo ka toobadkeena dembiyadayada ayaa ah wax aan suurtagal ahayn annaga in aan sameyno. Waxaan ku aragnay astaamaha bikrada wiilkeeda ,taasoo ah Nabiyada ay ka mid ah sida Daa`uud (NNKH) iyo Muxamed (NNKH) ay qiran doonay dembiyadooda. Tani aad bay noogu adag tahay inaan qabanno maxaa yeelay waxay noo horseedaysaa dambiilenimo iyo ceeb – waxaan ka dooraynaa inaan wax kale qabano tan mooyee. Laakiin tani waa wixii Yaxye (NNKH) ku wacdiyey in dadku u baahan yihiin inay sameeyaan si ay isugu diyaar garoobaan Boqortooyada Ilaah ee soo socota.
U digidii hogaamiye diimeedyada aan toobada keenin
Runtii Qaarna way sameeyeen tan, laakiin dhammaantood ma aha in si u qumman u qirteen dembiyadooda. Injil wuxuu leeyahay:
7 Laakiin goortuu arkay qaar badan oo Farrisiin iyo Sadukiin ah oo baabtiiskiisa yimid wuxuu ku yidhi, Dhal jilbisay, yaa idiinka digay inaad ka carartaan cadhada imanaysa? 8 Haddaba midho toobad istaahila soo bixiya, 9 hana ku fikirina inaad tidhaahdaan, Waxaannu leennahay Ibraahim oo aabbe noo ah. Waayo, waxaan idinku leeyahay, Ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo Ibraahim. 10 Haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda. Sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabkaa lagu tuuraa.
Mataayos 3: 7-10
Farrisiintii iyo Sadukiintii waxay ahaayeen macallimiintii sharciga Muuse. Waxay ahaayeen kuwa diinta u dadaala uguna dadaalay ilaalinta dhamaan (tukashada, soonka, allabaryada iwm) sida uu farayo sharciga. Qof kasta wuxuu moodayey in hogaamiyayaashan, oo ay baranayaan diintooda iyo dadaalkooduba ay yihiin kuwa sida xaqiiqada ah uu ilaah u aqbalay . Laakiin nebi Yahya (NNKH) wuxuu ugu yeeray ‘Dhiigga digaaga’ oo uga digay xukunka imaan doono oo debka ah! Sabab? Sababta oo ah ‘Haddaba midho tooba istaahilo soo bixiya’ tani waxay muujisay inaysan dhab u toobad keenin. Maysan qiran dembigooda laakiin waxay u adeegsanayeen xirfadooda diiniga ah inay qariyaan dembiyadooda. Iyo dhaxalkii diineed ee Nebi Ibraahim (NNKH), in kasta oo ay fiicnaayeen, ayaa ka dhigtay inay kibraan halkii ay toobad keeni lahaayeen.
Qirashada Daa’uud ayaa tusaale inoo ah
Markaa waxaan ka arki karnaa digniinta Yaxye in la toobad keen oo la qirato dembigu ayaa aad muhiim u tahay. Xaqiiqdii ayaa ah in la’aanteed aan la geli doonno Boqortooyada Ilaah. Digniintaas Farrisiinta iyo Sadukiinta maalintaas waxaan arki doonaa sidaay u fududahay oo ay dabiiciyan u tahay in aan dembigeenna ku qarinno diinta. Markaa balk a waran annaga iyo adiga? Tan waxaa loo diiwaangeliyay inay digniin noo ahaato annaga sidoo kale waa inaanu madax adkaanin oo aan diidin toobad keenista. Halkii aan ka raalligelin lahayn dembiyadeenna, oo aan iska dhigno inaanan dembaabin, ama aan qarinno waa inaan raacno tusaalaha Dawud (NNKH) kaasoo markii loo fiirsaday dembigiisa uu ku tukaday Sabuur-ka qirashada soo socota:
Ilaahow, iigu naxariiso sida raxmaddaadu tahay,
Midho toobad keena
Qirasho iyo isbadal ayaa yimid filasho ah nolol ka duwan tii hore. Dadku waxay waydiiyeen Yaxya (NNKH) sida ay tahay inay u muujiyaan midhaha tawbadkeenkooda, waana sida ay Injil u diiwaangeliso dooddan:
10 Markaasaa dadkii badnaa weyddiiyeen, oo waxay ku yidhaahdeen, Haddaba maxaannu samaynaa? 11 Kolkaasuu u jawaabay oo iyagii ku yidhi, Kii laba khamiis qabaa, ha siiyo kii aan waxba qabin; kii cunto qabaana, sidaas oo kale ha yeelo. 12 Markaasaa waxaa u yimid cashuurqaadayaal in la baabtiiso, waxayna ku yidhaahdeen, Macallimow, annaguna maxaannu samaynaa? 13 Isaguna wuxuu ku yidhi, Waxaa laydiin amray wax ka badan ha qaadanina. 14 Markaasaa askarna weyddiisay oo ku tidhi, Annaguna maxaannu samaynaa? Wuxuu iyagii ku yidhi, Ninna ha dulmina, oo ninna ha masabidina; mushahaaradiinnana raalli ku ahaada.
Luukos 3: 10-14
Yaxye ma Masiixiiyaa?
Xooganaanta ay leedahay fariintan aawadeed,Dad badan ayaa la yaabahay sidaasoo kale haduu yahay Masiixa.Tanina waxaay ahayd siduu Injiilka oga hadlay.
15 Intii dadku filanayeen oo kulligoodna qalbiyadooda kaga fikirayeen Yooxanaa inuu yahay Masiixii iyo in kale, 16 ayaa Yooxanaa kulligood u jawaabay oo ku yidhi, Anigu waxaan idinku baabtiisaa biyo, laakiin waxaa imanaya ku iga itaal weyn, kan aanan istaahilin inaan yeelmihii kabihiisa furo. Isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa Ruuxa Quduuska ah iyo dab. 17 Masaftiisu gacantiisay ku jirtaa inuu goobtiisa wax lagu tumo aad u safeeyo oo sarreenkana maqsinkiisa ku soo ururiyo, laakiin buunshaha ayuu dab aan demeyn ku gubi doonaa.18 Digniin badan oo kale ayuu dadka ku wacdiyey.
Lukoos 3: 15-18
Nebi Yaxye (NNKH) wuxuu u yimid inuu dadka u diyaariyo si ay diyaar ugu ahaadaan Boqortooyada Ilaahay. Laakiin isagu uma uu diyaarin isaga inuu siinaya sharci badan, laakiin wuxuu ugu yeedhay inay ka toobad keenaan dembiyadooda iyo inay qirtaan dembiyadooda. Xaqiiqdii tani way adag tahay in la sameeyo intii la raaci lahaa tilmaamo badan maadaama ay banaanka soo dhigeyso ceebahayada iyo dambigayada. Oo waxay ahayd hoggaamiyeyaasha diinta ee maalintaas isu keeni karin inay toobad keenaan oo ay dembiyadooda qirtaan. Waxayse diintooda u adeegsadeen inay qarsadaan dembiyadooda. Laakiin doorashada awgeed waxay u diyaarsanayeen inayan helin Masiix ayna fahmaan Boqortooyada Ilaahay markay la timid fariintiisa. Digniintan Yaxye (NNKH) ayaa ah mid la mid ah tan maanta ina khuseysa. Wuxuu naga codsanayaa inaan ka toobadkeenno dembiyadeenna oo aan qiranno. Ma rabnaa sidaa?
Author [email protected]Posted on 24/12/2019 20/02/2020 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags ? Muxuu wacdiyey Yaxya?, Injil wuu kashifay, oo aan la aqoon nebi Yaxya, wuxuu ahaa yaxya Yooxanaa Baabtiishii, yaa Yaxye, Yahya ee Injil, yahya nebi, Yaxye, Yaxye iyo toobad keenistaLeave a comment on Nabi Yaxye ama Yooxaana wuxuu diyaariyay wadadii